Posted by zarny win at 9:47 AM9comments:
cartoonist knows about me, Hee Hee!
Posted by zarny win at 11:39 PM No comments:
game for me :D
Posted by zarny win at 9:01 AM No comments:
စစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို တိုက်ခိုက်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးမှာ လက်တကမ်း အကွာတွင်ရှိနေသည်။ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကွန်ပြူတာတလုံးသာ လိုအပ်သည်။ moemaka.com သို့ သွားရောက်ပြီး သန်းရွှေကို ဘယ်လိုဆော်ရမလဲ ဟု အမည်ပေးထားသော ကွန်ပျူတာဂိမ်းကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ကာတွန်းဆရာ ဘိရုမာက မိုးမခ ပရိသတ်များအတွက် မြန်မာဆန်ဆန် တီထွင်ပေးလိုက်သည့် တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by zarny win at 6:03 AM No comments:
myanmar dot com with double "A"
ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးတဲ့သူတွေများ ဟိုလူက ၀က်ဆိုက်လုပ်ပေးချင်၊ ဒီလူက ဘလော့ဂ် လုပ်ပေးချင်နဲ့။ အင်း - မနာလို မရှိကြနဲ့ဗျို့။
ကျုပ်တို့ဝက်ဆိုက်အသစ်ကို သွားချင်ရင်တော့ လိပ်စာက ဟောသမှာ - http://myanmaar.com
အေက ၂လုံးနော်။ ၁လုံးထဲဆို အဟောင်းကိုပဲ ရောက်သွားလိမ့်မယ်။
နည်းနည်း အသေးစိပ်သိချင်ရင် ဟောဒီကို သွားပေတော့ - http://moemaka.blogspot.com/2008/06/danish-art-group-ridicules-nay-pyi-taw.html
Posted by zarny win at 12:11 AM 1 comment:
the select area is empty
ကျုပ်နဲ့ ကျုပ်ရဲ့မိဖုရားကြီးဗျာ။ စာထဲမှာတော့ ဘာတွေရေးထားမှန်းမသိဘူး။ ဘာသာပြန်ပေးပါဦး။
Posted by zarny win at 5:39 PM No comments:
သူက ဘာကို ဆိုလိုချင်မှန်းမသိဘူး။
အေပီသတင်းမှာတော့ Junta Moves Zoo Animals in Myanmar လို့ရေးထားတယ်ဆိုပဲ။
Posted by zarny win at 5:37 PM No comments:
one more poem for me
ကျုပ်ကို ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ ဂုဏ်ပြုပြန်ပြီ တဲ့။
ဒီမှာ နဲ့ ဒီမှာ တွေ့ရတာပဲ။
Posted by zarny win at 5:43 AM 1 comment:
မင်းတြားဂျီးကို ဂုဏ်ပြုဖန်တီးထားတဲ့ ပို့စကဒ်တွေကလည်း အဆက်မပြတ်
Posted by zarny win at 12:09 AM 1 comment:
Senior General Bin La Shwe
အခုတလော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကို ဂုဏ်ပြုရေးဆွဲထားတဲ့ Mr. Creator ရဲ့ လက်ရာတွေ အင်တာနက်မှာ ပျံ့နေလေရဲ့။ အကောင်းဆုံးပုံကို တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဘင်လာရွှေ လို့ ဖန်တီးသူက အမည်ပေးပါတယ်။
Posted by zarny win at 6:20 AM2comments:
very nice poem for me!
ကျုပ်အတွက် လိုဂိုတစ်ခု ထပ်တိုးပြန်ပြီ လို့
ဒီဘလော့ဂ် အပ်ဒိတ်လုပ်ပေးတဲ့သူက ရယ်ရယ်မောမောဆိုတယ်။)
Posted by zarny win at 6:36 AM No comments:
24 hrs medical treatment
နိုင်ငံတော်အတွက် လုပ်ပေးနေရလို့ ကျန်းမာရေးတောင် ချို့ယွင်းလာပြီဗျာ။ ဆေးအိတ်နဲ့တစ်ယောက် တကောက်ကောက်လိုက်နေရတာသာ ကြည့်ပေတော့ အရပ်ကတို့ရေ။
Posted by zarny win at 9:03 PM No comments:
buddha statue with Than Shwe's face
ကျုပ်မျက်နှာနဲ့တူအောင် အော်ဒါမှာထားတဲ့ ဆင်းတုတော်ဗျာ။ ရွှေတိဂုံဘုရား တောင်ဖက်မုခ်အခြမ်းမှာရှိတယ် ဆိုပဲ။ (ကျုပ်က အရှေ့အနောက်တောင်မြောက် သိပ်မခွဲတတ်လို့ သေချာမသိဘူး။) ဒီပုံကိုလည်း တင်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး ကျုပ်ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ။ တခြားလူတွေက တင်လိုက်တော့လည်း မထူးတော့ဘူးဆိုပြီး တင်လိုက်ပါပြီ။ မော်ဖူးစေဗျား-
Posted by zarny win at 8:53 PM 1 comment:
vdo clip from "www.blip.tv"
စက်တင်ဘာတုန်းကဗျာ။ ကျုပ်ကောင်တွေက ဆူပူလိုသူတွေကို နှိပ်ကွက်လိုက်တာ ကျုပ်ဖြင့် အားရလိုက်တာ။ ပုံကိုပဲ ကလစ်ပြီး ကြည့်ပေတော့။ တခြားဝက်ဆိုက်တွေထက် မြင်ကွင်းနည်းနည်းပိုကျယ်တယ်။ you tube ထက် ပိုကြည်တယ်။ ကျုပ် blip.tv မှာ တွေ့ခဲ့တာ။ ကိုမိုးသီး ဘလော့ဂ်စပေါ့ဒေါ့ကွန်မှာ အရင်ဆုံး တင်ပြီးသားပါ။
ဒေါင်းလုတ်လုပ်တာ နည်းနည်းတော့ အချိန်ပေးရမယ်။ ထုံးစံအတိုင်း pause ကို နှိပ်ထားလိုက်။ တော်တော်လေးကြာမှ playပြန်လုပ်။ နို့မဟုတ်ရင် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဖြစ်မယ်။
Posted by zarny win at 12:18 AM 1 comment:
nice sculpture; Than Shwe in pig body
ThanShwe by Jim McNalis
Posted by zarny win at 6:26 AM No comments:
Than Shwe's kids
Posted by zarny win at 6:21 AM No comments:
Posted by zarny win at 8:05 PM No comments:
than shwe in the past
Posted by zarny win at 7:51 PM No comments:
red face than shwe
Posted by zarny win at 7:46 PM No comments:
handsome than shwe
Posted by zarny win at 7:41 PM No comments:
than shwe 20 years ago
Posted by zarny win at 7:40 PM No comments:
hey, am i good looking ?
Posted by zarny win at 7:35 PM No comments:
Posted by zarny win at 7:33 PM No comments:
Posted by zarny win at 7:29 PM No comments:
bye bye! i m leaving :)
Posted by zarny win at 7:22 PM No comments: